About-Sunpai Warshadaha Xaddidan
Sunpai Industries Limited waxay ku takhasustay waxyaabaha udgoonku ka badan yahay 15 sano, kuwaas oo injineero aad u fiican u leh amarada OEM iyo ODM.
In ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo OEM ah, oo leh sumad iska leh - SOICARE, waxay aasaastay xiriirka ganacsi ee macaamiisha in kabadan 300 oo adduunka ah, gaar ahaan Yurub, Waqooyiga Ameerika, Ruushka, Australia iyo Dubai. ISO, FCC, UL, RoHS, CE&GS ayaa la caddeeyay.
SOICARE waxay u soo bandhigtay macaamiisha hab ku habboon oo ay ku dukaameystaan ​​noocyo badan oo ah alaabooyinka qaab nololeedka oo qiime qiimayaal ah iyada oo loo marayo shabakadaha, kuwaas oo lagu heli karo luqado badan oo waaweyn.
www.aroma-diffusers.com waxay soosaartaa alaabada qeybaha udgoon ee caraf udgoon, huurinta shumaca, shumaca udgoon.
Dooro Soicare, dooro qaab nololeedka caafimaadka leh.
Tayada alaabooyinka oo dhan waxaa damaanad qaadaya in kabadan 10 hannaan kontarool oo tayo leh, 100% u heellan xakamayn tayo leh.
Maaddaama aan leenahay koox soo-saare xirfad leh iyo khadka wax ku oolka ah, waxaan dammaanad qaadi karnaa gaarsiinta waqtiga ku habboon.
Waxaan nahay warshad xirfadle ah oo sifiican u qalabaysan, waxaanan kuusoo bandhigi karnaa alaab lagu kalsoonaan karo oo leh qiimo tartan.
In kasta oo aan leenahay xulasho dhoofineed sida FOB iyo CIF, markasta waa lagugu soo dhaweynayaa inaad dooratid si kasta oo aad rabto.